I-DA ithi lingu-37.3% izinga labaphase u-matric, hhayi u-75.1% omenyezelwe | News24
I-DA ithi lingu-37.3% izinga labaphase u-matric, hhayi u-75.1% omenyezelwe
Johannesburg - IDemocratic Alliance isichaze imiphumela yakamuva kamatikuletsheni njengento ekhathazayo, okungamele ijatshulelwe.
UNomsa Marchesi‚ obhekele ezemfundo kwi-DA, uthe izinga lika-75.1% okuphumelele ngalo abafundi bamatikuletshi elimenyezelwe ngoLwesine ebusuku alivezi ubunjalo besimo sezemfundo kuleli.
“Izinga lemfundo eNingizimu Afrika alibingcono nakuba uNgqongqoshe weMfundo eyisisekelo, u-Angie Motshekga‚ encoma imiphumela ka-2017‚” kusho uMarchesi esitatimendnei.
“Nakuba izinga elingu-75.1% lingabukeka ligculisa, akenzanga okwanele okubhekana nezinga langempela lokuphasa kwabafundi – bangaki abafundi ababenza u-grade 10 eminyakeni emibili eyedlule abaphumelele umatikuletsheni – nezinga eliphezulu lezingane eziyeka isikole.”
OLUNYE UDABA: IFree State iyona ehambe phambili ngemiphumela ka-matric
UMarchesi uthi u-41% wabafundi ababenza u-grade 10 ngo-2015 abazange bawuphase umatikuletsheni ngonyaka odlule -futhi asamukelekile nesibalo sezingane eziyeka isikole.
“UNgqongqoshe kodwa akakuboni lokhu njengenkinga futhi wasinqaba nesicelo sethu sokwenza uphenyo ngokuyeka isikole kwabafundi,” kusho uMarchesi.
I-DA ithi empeleni izinga labaphumelele u-matric ngonyaka odlule akuwona u-75.1% kodwa u-37.3% uma kubalwa nalabo bafundi ababenza u-grade 10 ngo-2015 abangaphumelelanga noma abasiyeka phakathi isikole.